10ka Xul ee Ugu Wanaagsan YouTube-ka Qalabka Keyword | BehMaster
Bogga ugu weyn/YouTube/10ka Xul ee Ugu Wanaagsan Qalabka Keyword YouTube
Qalabka muhiimka ah ee YouTube waxa la soo bandhigay Noofambar 2008 waxana la naafo noqday Sebtembar 2014
Si degdeg ah maanta, iyo YouTube waxay leedahay in ka badan 2 bilyan isticmaalayaasha bishiiba soo gala adduunka oo dhan kuwaas oo daawada in ka badan bilyan saacadood oo muuqaal ah maalin kasta.
Dhab ahaantii way daawanayaan, oo haddana in ka badan 500 saacadood oo xog ah ayaa la soo geliyaa YouTube daqiiqad kasta. Marka, qofna - oo aan ula jeedo qofna - ma daawan karo muuqaal kasta oo YouTube-ka cusub oo la daabacay.
Tani waxay ka dhigan tahay in abuurista nuxur weyn ay tahay kala bar dagaalka si loogu guuleysto goobta.
Iyada oo leh waxyaabo badan oo loogu talagalay daawadayaasha inay ka doortaan, fiidiyoowga SEO faa'iidooyinka iyo suuqgeynayaasha nuxurka waxay rabaan inay ogaadaan ereyada muhiimka ah iyo ereyada raadinta ee lagu beegsanayo YouTube. Nasiib wanaag, waxaad haysataa doorashooyin badan.
Waa kuwan 10 ka ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan aaladaha ereyga muhiimka ah ee YouTube-ka-doorashada sida aan aniga qudhaydu u isticmaali lahaa.
Dhab ahaantii, waxaan inta badan isticmaalaa in ka badan hal qalabkan si aan u gudbiyo fikrado istiraatijiyadeed, xogta muhiimka ah, talooyinka xeeladaysan, iyo isbeddellada ganacsiga suuq-geynta fiidiyoowga ah ee macaamiisha iyo ardayda Ingiriisiga ku hadasha.
Continue Reading Hoos
Dareen xor u ah inaad isticmaasho dhowr iyaga ka mid ah, gaar ahaan marka aad maskaxda wax ka qabanayso.
1. Falanqaynta YouTube
Ku bilow cilmi-baadhista erayga muhiimka ah adiga oo dib u eegaya YouTube Analytics.
Tab-gaarista ayaa ku siinaysa kooban sida ay dhagaystayaashaadu u ogaanayaan fiidiyowyada kanaalkaaga. Si gaar ah u fiirso warbixinta Raadinta YouTube, taasoo tusinaysa ereyada raadinta ee daawadayaashu isticmaalaan si ay u ogaadaan macluumaadkaaga.
Sida mashiinka raadinta Google, raadinta YouTube waxay ku dadaalaysaa inay tusto isticmaalayaasha natiijooyinka ugu habboon iyadoo loo eegayo raadinta ereyada muhiimka ah. Fiidiyowyada waxaa lagu kala qiimeeyay iyadoo lagu salaynayo qodobada soo socda:
Sida ugu wanaagsan ee ciwaanka iyo tilmaanta fiidyowga u siman yihiin raadinta daawadaha.
Suurtagalnimada in lagu wado ka-qaybgalka ugu badan ee weydiinta isticmaalaha.
Sida aan ku xusay boostada ciwaankeedu yahay Sidee YouTube u soo saaraa iyo Fiidiyowyada la soo jeediyay ee darajada, kuwani waa xoog ku dhufashada algorithm raadinta YouTube oo aad rabto inaad fahanto.
Sidoo kale hubi warbixinta Fiidyaha la soo jeediyay, taasoo ku tusinaysa taraafikada talooyinka soo muuqda ee ku xiga ama ka dambeeya fiidyaha kale iyo xiriirinta sharraxaadda fiidyaha.
Fiidiyowyadani waxay noqon karaan fiidiyowyo adiga kuu gaar ah ama qof kale.
Fiidiyowyada la soo jeediyay ayaa lagula talinayaa iyadoo ay la socdaan fiidyaha ay daawadayaashaadu daawanayaan hoosta "Up Next." Talooyinkan ayaa loo kala qiimeeyay si ay dhagaystayaashaada ugu soo bandhigaan fiidiyowyada ay u badan tahay inay daawato xiga.
Fiidyowyadani waxay inta badan la xiriiraan fiidyaha ay daawadayaashaadu daawanayaan, laakiin sidoo kale waa la gaaryeelan karaa iyadoo lagu saleynayo taariikhda daawashada daawadayaasha.
Si kale haddii loo dhigo, xitaa haddii kanaalkaagu uu si ciriiri ah diiradda u saaro xoolo-dhaqatada nerf, waa inaad ogaataa in waxa ku jira xoola-dhaqatada nerf-ka-ku-xidhan, ama nuska-u-fiirsiga xoolo-dhaqatada nerf ay abuuraan gaadiid badan.
2. Google Trends' YouTube Search Tab
Google Trends wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sahamiso waxa dunidu ay ka raadinaysay Google ilaa 2004 iyo YouTube ilaa 2008.
Markaad geliso erey ama mawduuc sanduuqa Sahaminta, Google Trends ayaa ku tusi doonta "raadinta shabakadda" xiisaha 12 bilood ee la soo dhaafay si caadi ah.
Guji tab ka raadinta Shabakadda iyo liiska hoos-u-dhaca ayaa ku tusi doona xulashooyin kale, oo ay ku jiraan Raadinta YouTube.
Sababtoo ah qalabku wuxuu muujinayaa isbeddellada muuqaal ahaan, waxaan inta badan isticmaalaa Google Trends si aan u muujiyo, tusaale ahaan, in ay jirto 3.75 jeer xiiso badan [Jedi] marka loo eego [Sith].
Tani waxay iga caawinaysaa inaan ka dhaadhiciyo xitaa xubnaha Golaha Nidaamyada Dhexdhexaadka ah si ay ugu muujiyaan Jedi fiidiyowgooda soo socda ee YouTube.
Waxaan sidoo kale hoos u dhigi karaa oo aan eegi karaa weydiimaha la xidhiidha. Dhamaadkii usbuuca markii aan qorayay qoraalkan, saddexda weydiimood ee ugu sarreeya ee la xidhiidha waxay ahaayeen:
[Amarka dhacay Jedi]
In kastoo, markii aan eegay saddexda weydiimood ee la xidhiidha, waxaan arkay:
[Star Wars squadrons]
[Jedi Temple challenge]
Waa maxay kursiga golaha Jedi ee ugu raaxada badan?
Marka, xitaa ka dib markaan ku qanciyo macmiilka inuu ku muujiyo Jedi fiidiyowgooda soo socda ee YouTube, weli waxaan haystaa boos badan oo aan ku maareeyo marka ay timaado abuurista waxyaabo khuseeya, qorista cinwaan soo jiidasho leh, oo si sax ah u qeexaya fiidiyowga sharaxaadda.
Hey, qofna ma doonayo inuu u rogo waxyaabaha madadaalada ah droids.
3. Saadaasha Raadinta YouTube
Mararka qaarkood, waxaan u baahanahay inaan hagaajiyo fiidyaha duulista. Taasi waa marka aan isticmaalo saadaasha raadinta YouTube, taas oo jirtay ilaa May 2008.
Si aad u isticmaasho, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad tagtaa YouTube oo aad bilowdaa inaad ku qorto erey sida [Star Wars] sanduuqa raadinta. Liiska hoos-u-dhaca ayaa ku siin doona saadaal raadin taxane ah, sida:
[Aragtida Star Wars]
[Mawduuca Star Wars]
[Musiga Star Wars]
Sida saadaasha raadinta Google, saadaasha raadinta YouTube waa ereyo raadin oo suurtogal ah oo la xidhiidha waxa aad hore u qortay iyo waxa ay dadka kale raadinayaan, oo ay ku jiraan raadinta isbeddelka.
Kuwa caanka ah ayaa ku jira halka ugu sareysa, kuwa yar ee caanka ah ayaa ku jira liiska hoose.
Hadda, waxaan garwaaqsaday in ku socdaalida hawada sare aanay jeclayn boodhka dalagga. Xisaabinta saxda ah la'aanteed, waxaad si toos ah uga duuli kartaa xiddig ama aad aad ugu dhowdahay supernova taasina waxay ku dhammaan doontaa safarkaaga si degdeg ah, miyaanay ahayn?
Laakiin, haddii ay i eryanayaan Imperial cruisers oo aanan sugi karin dhowr daqiiqadood si aan uga helo isku-duwayaasha navicomputer-ka, markaa waxaan isticmaali lahaa saadaasha raadinta YouTube ee fiidiyowga SEO.
Ka sokow, waxaan aqaan dhowr maneuver. Kadib marka aad soo rogto muqaal, waxa aad mar walba ka bedeli kartaa cinwaankiisa iyo sharaxaadiisa istuudiyaha YouTube.
4. Laga soo bilaabo YouTube
YouTube waxay soo bandhigtay tab "Trending" bishii Disembar 2015. Waxay ujeedadeedu tahay in la soo bandhigo fiidiyowyada ay daawadayaal badan oo kala duwan ay ka heli doonaan xiiso.
Qaar ka mid ah isbeddelladan waa kuwo la saadaalin karo, sida hees cusub oo ka timid fanaan caan ah ama filim cusub oo filim ah. Laakiin kuwa kale ayaa la yaab leh, sida fiidiyoowga fayraska.
Maanta, Trending on YouTube wuxuu ku yaalaa hoosta tabka sahamin. Oo hadda waxay ku timaadaa afar dhadhan: Hadda, Muusikada, ciyaaraha, iyo filimada.
Isbeddelku maaha mid shakhsi ahaaneed Waxay u soo bandhigaysaa isla liis la mid ah fiidiyowyada isbeddelaya ee waddan kasta dhammaan isticmaaleyaasha, waana sababta aad u arki karto fiidiyowyada Trending ee aan isku luqadda ahayn biraawsarkaaga.
Liiska fiidyaha isbedelaya waxa la cusboonaysiiyaa qiyaas ahaan 15 daqiiqo kasta. Marka, cusbooneysiin kasta, fiidiyowyadu waxay u dhaqaaqi karaan kor, hoos, ama waxay ku sugnaan karaan isla booska liiska.
Muxuu fiidiyow SEO ah ama suuqgeyn ka kooban u doonayaa inuu ogaado waxa hadda socda?
Hagaag, haddii fiidyow ka muuqda Baby Yoda uu fayras galo, waxay kugu dhiirigelin kartaa inaad abuurto muuqaal muujinaya:
[Baby Yoda toy]
[Ilmaha Yoda oo cunaya ukun]
[Ilmaha Yoda wuxuu ku kaxeeyaa si toos ah]
Qorsheeyaha Keyword Ads ee Google wuxuu ku jiraa liiska shanaad ee liiska 10 ka ugu wanaagsan ee aaladaha muhiimka ah ee YouTube, inkasta oo aan loogu talagelin muuqaalka SEO, waxay ka dhigi doontaa dhibic shan xawaarihii hore.
Waxaa laga yaabaa inaysan u ekaan wax badan, laakiin waxay ku heshay halka ay ku jirto. Aniguna waxaan ku daray qaar ka mid ah wax ka beddelka gaarka ah naftayda.
Tusaale ahaan, natiijooyinka caadiga ah waxay kuu sheegayaan inay jiraan 100,000 ilaa 1 milyan oo raadin bishiiba ah [Han Solo] iyo 100,000 ilaa 1 milyan oo raadin bishiiba ah [Princess Leia].
Maxaad ku samayn kartaa macluumaadkaas?
Hagaag, waxaan u adeegsaday aaladda si aan u tuso macaamiisha in xayeysiinta ereyga [Han Solo] aysan waxba ku kacayn sababtoo ah tartanku wuu hooseeyaa. Laakiin, iibsashada xayaysiisyada ereyga, [Princess Leia] waxay ku kici doontaa $0.55 ilaa $1.69 sababtoo ah tartanku waa dhexdhexaad.
Taasi waxay sidoo kale awood ii siinaysaa inaan qiyaaso qiimaha gujisyada organic ee fiidiyoowga YouTube ee loo habeeyay [Princess Leia].
Haddii celceliska fiidyaha YouTube-ka uu helo in ka badan 16,000 oo aragtiyood - oo macmiilkaygu ay ahayd inuu iibsado dhammaan gujisyada organic isticmaalaya Google Ads, markaa taasi waxay ku kici lahayd iyaga in ka badan $ 8,800 ilaa $ 27,040.
Oo, haddii lacagtu tahay waxa aad jeceshahay, markaa taasi waa waxa aad heli doonto.
Hadda, shanta ugu horreeya ee aaladaha ereyga muhiimka ah ee YouTube ee liiskan ku jira waa bilaash sababtoo ah waxay ka caawiyeen madal inay soo saarto $6 bilyan oo dakhli xayeysiis ah Q1 ee 2021.
Laakiin, waxaa jira shan kale oo kale oo ah aaladaha muhiimka ah ee YouTube-ka taas oo fiidiyoowyada SEO faa'iido u leh iyo suuqgeyneyaasha nuxurku ay tahay inay tixgeliyaan adeegsiga - sababtoo ah waxay kaa caawin karaan inaad Kessel Run ku sameyso wax ka yar 12 xabbo!
Waxaan isticmaalay laba ka mid ah sannadihii la soo dhaafay si aan uga gudbo xiddigaha Imperial. Ma aha kuwa bulk-cruiser-ka maxalliga ah, maskaxda ku hay. Waxaan hadda ka hadlayaa maraakiibta waaweyn ee Corellian.
6. Qalabka Keyword ee YouTube
Mid ka mid ah beddelladan ayaa leh magaca guud ee Qalabka Keyword ee YouTube.
Waxaa bixiya Key Tools Limited, oo fadhigeedu yahay Hong Kong, Qalabka Keyword Tool wuxuu ka soo jiidanayaa talooyinka raadinta YouTube saadaasha raadinta.
Qalabka Keyword ee YouTube wuxuu kaa caawinayaa inaad ka hesho in ka badan 750 ereyada muhiimka ah ee daba-dheer ee saadaasha raadinta adoo ku dhejinaya oo diyaarinaya ereyga muhiimka ah ee aad ku qeexday xarfo iyo nambaro kala duwan.
Si loo sameeyo soo jeedinteeda muhiimka ah ee muhiimka ah, Qalabka Keyword wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dejiso natiijooyinka 100+ka waddan ee ku xeeran ereyga iyo 80ka luqadood ee ay taageerto YouTube.
Nooca Keyword Tool Pro ee qalabku wuxuu isticmaalaa xogta clickstream si loo qiyaaso mugga raadinta ereyada muhiimka ah ee YouTube.
Hadda, maxaad u doonaysaa inaad ku bixiso $69 bishii Pro Basic, $79 bishii Pro Plus, ama $150 bishiiba is-diiwaangelinta Ganacsiga Pro?
Hagaag, oo leh "Star Wars: Dufcada Xun" hadda laga heli karo Disney Plus, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho Keyword Tool Pro si aad u hesho qiyaasta mugga raadinta ereyada muhiimka ah ee YouTube sida:
[Amarka Dufcadda Xun 66]
[Qaybta Dufcadda Xun]
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad hesho kharash-guji kasta iyo xogta tartanka Google Ads. Waxaana laga yaabaa inaad rabto inaad shaandhayso, kala soocdo, oo aad dhoofiso liiska natiijooyinka ereyga muhiimka ah ee la soo saaray.
Waa maxay sababtu? Hagaag, waxaa laga yaabaa inaadan xiisaynaynin inaad la tartanto taxanaha animated ee Disney ee ku saabsan xubnaha koox gaar ah oo clones ah kuwaas oo u hela jidkooda galaxy isbedela wixii ka dambeeyay Dagaalkii Clone.
Marka, waxaad dooneysaa inaad hesho ereyo muhiim ah sida [The Bad Batch reaction], [The Batch Batch Episode 2 reaction], iyo [Batch Batch Review], kuwaas oo ay u badan tahay inay la kulmaan tartan toos ah kanaalka rasmiga ah ee Star Wars YouTube.
Qalab kale oo ereyga muhiimka ah ee YouTube oo kale oo mudan in la isticmaalo waa vidIQ. Nooca aasaasiga ah waa bilaash, nooca Pro wuxuu ka bilaabmaa $7.50 bishii, nooca Kobcinta wuxuu ka bilaabmaa $39.00 bishii, nooca Boost+na wuxuu ka bilaabmaa $415.00 bishii.
Hadda, boggoodu wuxuu leeyahay:
"Waxaan kaa caawin doonaa inaad ku kordhiso maktabadaada tags 10x in ka yar 10 daqiiqo, oo aad ogaato fursadaha nuxurka ee aad ka maqan tahay."
Si kastaba ha ahaatee, Caawinta YouTube waxay leedahay:
"Tags-ku waa faa'iido leh haddii waxa ku jira fiidyahaaga si caadi ah loo qoray. Haddii kale, tagsku waxa ay door yar ka ciyaaraan daahfurka fiidyahaaga."
Marka, marka aad eegto agabka liiska hubinta hagaajinta fiidyaha ee muuqaal sida, “Buugga Boba Fett Teaser Rasmiga ah | Soo socda Dec 2021 | Disney+," u fiirso wax badan oo ka mid ah qiimeynta cinwaankaaga iyo sharraxaadda oo aad u fiirso qiimeynta calaamadahaaga.
Fiidiyowgu hadda wuxuu ku jiraa #1 [Buugga Boba Fett], #1 ee [Boba Fett Disney Plus], iyo #2 [Boba Fett taxane teaser].
Marka, xaqiiqda ah in aysan si fiican u qiimeynin in ka badan darsin ereyo kale oo ku jira tags macnaheedu maaha inaad ku shubto xogtan qashinka ka hor inta aadan boodin hyperspace.
Qalab kale oo ay tahay in aad isticmaasho waa TubeBuddy, browser-ka bilaashka ah ee kordhinta iyo app-ka moobilka oo si toos ah u dhex gala YouTube.
Waxa kale oo jira nooca Pro oo ah $7.20 bishii, nooca Xiddiga oo ah $15.20 bishii, iyo nooca Legend oo ah $39.20 bishii.
Qalabka SEO ee fiidiyoowga TubeBuddy waxaa ka mid ah:
A Keyword Explorer, kaas oo kaa caawin kara inaad hesho ereyada raadinta daba-dheer si aad si fiican u beegsato waxa ay dadku ka raadinayaan YouTube.
Hantidhawrka Dhaqanka ugu Wacan, Kaas oo sameeya hubinta tooska ah si loo hubiyo inaad raacdo talooyinka YouTube.
Turjumaan Automatic ah, kaas oo u tarjuma ciwaanka fiidyahaaga iyo sharaxaadiisa luuqado kale si loo kordhiyo daawashada caalamka.
Tani waxay ku imanaysaa anfaca markaad hagaajinayso fiidiyooyo taxane ah ee erayada raadinta:
[Ahsoka vs Darth Vader]
[Ahsoka vs Maul]
[Ahsoka vs Garsooraha]
9. Ahrefs' Keyword Explorer
Beddel kale oo ay tahay inaad tixgeliso inaad isticmaasho waa Keyword Explorer by Ahrefs, taas oo qayb ka ah agabka SEO oo dhan-hal-hal ah.
Qiimayntu waxay u dhaxaysaa $99 bishii Lite, $179 bishii heerka caadiga ah, $399 bishii ee horumarsan, iyo $999 bishii ee Wakaalada.
Keyword Explorer wuxuu ku shaqeeyaa mid ka mid ah xog ururinta saddexaad ee adduunka ugu weyn oo ka badan 7 bilyan oo weydiimo raadin ah, oo lagu cusboonaysiiyo xog cusub bishii, 171 waddan.
Waxayna ku qiyaastay mugga ereyada muhiimka ah ee 10 matoorada raadinta kala duwan: Google, YouTube, Amazon, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, Daum, Naver, iyo Seznam.
Keyword Explorer sidoo kale waxay bixisaa:
Buug Goobid Sax ah, kuwaas oo isticmaala xogta clickstream si ay u nadiifiyaan tiradayada raadinta bishiiba mar, iyaga oo hubinaya in ay mar walba la socdaan.
Dhibcaha Erayga Dhibka, kaas oo xisaabinaya sida ay u adag tahay in lagu darajeeyo eraygaaga muhiimka ah iyadoo lagu saleynayo boggaga ugu sarreeya ee hadda.
Qiyaasta "guji", taasoo tuseysa tirada la qiyaasay ee gujisyada ereyada muhiimka ah.
Haddii aad qorshaynayso olole ku saabsan is-beddelka soo socda ee Mandalorian, "Rangers of the New Republic," markaa waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ogaato wax kasta oo aad kari karto - gaar ahaan hadda in dabeecadda Cara Dune la beddeli doono.
10. Qalabka Sixirka ee Semrush
Beddelka tobnaad ee lagu hubin karo waa Keyword Magic Tool ka Semrush.
Sidoo kale waa qayb ka mid ah qalabyada SEO-ga oo dhan.
Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa $119 bishii Pro, $229 bishii Guru, iyo $449 bishii ganacsiga.
Halkan, waxaad ka heli kartaa talooyinka muhiimka ah ee kaydka ereyga muhiimka ah ee ugu weyn suuqa, oo ay ku jiraan in ka badan 20 bilyan oo ereyo fure ah.
Semrush's Keyword Magic Tool wuxuu kaloo bixiyaa xogta:
Raadinta Cadadka, taas oo muujinaysa celceliska tirada raadinta bil kasta ee kelmad gaar ah oo ka badan 12 bilood.
Ereyo muhiim ah Way adagtahay, taas oo muujinaysa heerka dhibka (boqolkiiba) si aad uga sarreyso tartamayaashaada 20ka sare ee natiijooyinka raadinta dabiiciga ah.
Qaababka SERP, taasoo tusinaysa tirada natiijooyinka raadinta khaaska ah ee u muuqda waydiimo gaar ah.
Marka, marka Ewan McGregor uu dib u soo celiyo doorkiisa Obi-Wan Kenobi ee taxanahiisa xaddidan, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad wanaajiso fiidiyowyada ku saabsan halyeeyga Jedi Master.
Waa maxay sababta fiidiyooga SEO-ga iyo suuqgeynayaasha nuxurku u baahan yihiin qalab awood leh si ay ugu diyaariyaan "Obi-Wan Kenobi," oo bilaabay toogashada Abriil?
Sababtoo ah dhammaan waxa aan ognahay oo ku saabsan taxanaha dhacdooyinka gaarka ah ee xilligan waa sheekadu waxay bilaabataa 10 sano ka dib dhacdooyinka riwaayadaha ah ee "Star Wars: Aargoosiga Sith" halkaasoo Kenobi uu la kulmay guuldaradii ugu weyneyd, hoos u dhaca iyo musuqmaasuqa saaxiibkiisa ugu fiican iyo Jedi. Tababare, Anakin Skywalker, oo u rogay xumaanta Sith Lord Darth Vader.
Labadan qof oo badan ayaa dhintay si ay xogtan noogu keenaan.
Helitaanka ereyada raadinta ugu fiican ee galaxyada iyadoo lagu saleynayo xogtan aan dhamaystirnayn, waxaad u baahan tahay Keyword Magic Tool ama waa inaad hibo u leedahay siyaabaha Ciidanka.
Halkaa waxaad ku haysaa - 10 ka ugu wanaagsan ee aaladaha ereyga muhiimka ah ee YouTube.
Ma jiraan kuwa kale oo halkaas jooga?
Haa Laakin si fiican kuwan ka hor intaadan raacin Obi-Wan hore ee saliibiyadda ku habboon ee nacasnimada ah.
Kheyraad dheeri ah:
6 ee ugu Wanaagsan YouTube & Aaladaha Hagaajinta Fiidiyowga si kor loogu qaado aragtidaada
Wararka YouTube, Isbeddellada Dheeraadka ah, Farsamooyinka, iyo Tilmaamaha
Sida Loogu Isticmaalo Terapeak eBay 2021
Ka ilaali muusigga la soo dejiyay inay kaydin badan ku qaadaan iPhone
Saadaasha taraafikada shabakadda iyadoo la adeegsanayo Google Analytics iyo Facebook nabiga